Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fraport AG dia nametraka fanamarihana tamim-pahombiazana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Fraport AG dia nametraka fanamarihana tamim-pahombiazana.
Ny olan'ny fanamarihana anio dia nampitombo ny habetsaky ny famatsiam-bola vaovao natsangan'ny Fraport AG nandritra ny 2021 ka hatramin'ny € 2.9 miliara. Noho izany, ny Vondrona dia manana € 4.5 tapitrisa eo ho eo amin'ny famotsiam-bola ary koa ny zana-bola azo antoka sy tsy ampiasaina.
Natolotra nandritra ny dimy taona sy tapany sy tapany, dia navoaka tao amin'ny sampana efatra.
Noho ny filàna goavambe, ny totalin'ny laharana dia nakarina marobe tamin'ny vola 200 tapitrisa € tany am-piandohana.
Landesbank Hessen-Thüringen sy UniCredit Bank AG dia niasa ho mpitari-tafika iraisana amin'ny olan'ny fampindramam-bola Fraport.
Fraport AG dia nahavita nametraka fanamarihana promissory mitentina € 500 tapitrisa androany (21 Oktobra). Natolotra mandritra ny dimy taona sy tapany sy tapany, dia navoaka tao amin'ny sampana efatra. Noho ny fangatahana mafy avy amin'ny mpamatsy vola alemana sy iraisam-pirenena, ny totalin'ny laharam-pamokarana dia nakarina marobe tamin'ny volavola € 200 tapitrisa notombanana voalohany. Ny olana dia natao tany amin'ny faran'ny ambany amin'ny fanaparitahana ny vidiny.
Ny sandan'ny anjara Fraport AGNy mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka misahana ny fitantanam-bola sy ny fanaraha-maso (CFO), Prof. Dr. Matthias Zieschang, dia nilaza hoe: "Faly be izahay amin'ny fangatahana avo lenta avy amin'ny mpampiasa vola hananana ny taratasy fampindramam-bola. Ity dia vato mazava iray azo antoka momba ny fahatokisana ny Fraport Group. Ankoatr'izay, manamafy izany fa eo amin'ny lala-mahitsy isika. Noho ny fitantanana tsy fitovizan-drakitra tsy miovaova dia nahatratra ny tampon'ilay areti-mifindra coronavirus isika - ary afaka manao ny fampiasam-bola ilaina amin'ny ho avy koa izahay. ”
Ny olan'ny fanamarihana anio dia mampitombo ny vola vaovao natsangan'ny Ny sandan'ny anjara Fraport AG nandritra ny 2021 hatramin'ny € 2.9 miliara. Noho izany, ny Vondrona dia manana € 4.5 tapitrisa eo ho eo amin'ny famotsiam-bola ary koa ny zana-bola azo antoka sy tsy ampiasaina.
Landesbank Hessen-Thüringen ary UniCredit Bank AG dia niasa ho toy ny arranger iraisan'ny olana momba ny findramam-bola Fraport.